Chii chinonzi Pivot Point pane Wako Simba Wiricheya
Nei simba rako wiricheya famba nenzira yainoita? Mhinduro ndeye kutyaira vhiri, rinove rinokonzeresa maneuverability yesimba rako wiricheya.
Zvakangofanana nemota, macheya emagetsi anouya kumberi, kumashure nepakati kana pakati pekutyaira vhiri. Pivot poindi yekutyaira yega yega yakasiyana uye ichaona manejaverability yesachigaro chemagetsi. Iko kutyaira vhiri axle inopindirana neiyo base base centerline ndiyo pivot poindi. Icho chiri chakakomberedza nzvimbo iyi apo chigaro chinofamba uye kutendeuka.
Saka, iripi iyo Pivot Point?
Pivot poindi yekumashure vhiri rekutyaira iri kumashure kweseri kwechigaro chesimba kuseri kwechigaro. Mazhinji echigaro chesimba ari pamberi penzvimbo yepivot uye kazhinji ndiwo akasimba sachigaro wemasimba. Kana iwe uine chimwe cheizvi, pamwe unoona kuti chigaro chinosendamira kumashure kune ayo ekurwisa-matipi machubhu, kana uchikwira kukwira, kudzivirira kupunzika kwechigaro.
Aya macheya ane akanyanya kumhanya kwe6mph. Iyo yekumberi vhiri dhizaini ine yakakura kutendeuka nharaunda. Kana iwe uine chigaro chakadai uye uchizotsiva nerumwe rudzi rwevhiri vhiri, iwe uchafanirwa kuchinja tayi-pasi mumotokari yako kuti igone iyo nyowani dhiraivha yechigaro.
Pamberi Wheel Dhiraivha Simba Sachigaro
Kune kumberi vhiri rekutyaira emagetsi macheya, iyo pivot poindi ichave iri kumberi kumberi kwechigaro ine yakawanda yechigaro kumashure kwayo. Iwe unenge wakagara kuseri kwenzvimbo yepivot mune irudzi rwechigaro, izvo zvinoita kuti igadzikane panzvimbo dzisina kuenzana, kunyanya kukwira nekudzika makomo.
Ivo vakanaka kwazvo pakuenda pamusoro pezvipingamupinyi uye uchafanirwa kugadzirisa ako ekuchinja kuti utarise kumashure kwesachigaro. Chigaro ichi chinononoka kana chichienzaniswa nedzimwe mhando uye chine mwero mukuru we5.5 mph. Radiyo yekutendeuka inongova padiki padiki pane dhiri rekumavhiri dhizaini dhizaini.
Mid kana Center Wheel Drive Simba Sachigaro
Pakati kana pakati vhiri rekutyaira cheya chigaro chepivot chiri pasi pechigaro, nepakati pechigaro chaipo pamusoro penzvimbo yepivot. Rudzi urwu rwecheya rine diki diki rekutendeuka uye rinosvika pakumhanya kwazvo 5.5 mph. Ichi chigaro chinowanzo batirira pane isina kuenzana nzvimbo uye unogona kufunga zvakare kutenga imwe yeiyi kana uchifanira kupfuura pamusoro pemakomo akadzika.
Iwe unozofanirwa kufunga nezvekuti uchave kupi uye kupi kushandisa chigaro chako usati waita yako yekupedzisira kutenga sarudzo.